Madagascar - Afa-baraka ny fanjakana - miverina amin'ny toerany ny tonia ambony mpampanoa lalàna - Taratra du 14 mars 2018 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Madagascar – Afa-baraka ny fanjakana – miverina amin’ny toerany ny tonia ambony...
Madagascar – Afa-baraka ny fanjakana – miverina amin’ny toerany ny tonia ambony mpampanoa lalàna – Taratra du 14 mars 2018
Mitafy henatra tanteraka ny fitondrana sy ny minisiteran’ny Fitsarana. Voaporofo izao fa tsy mahay sy tsy mahalala ny tokony hataony ny mpitondra . naverin’ny filankevi-panjakana ary heverina ho toy ny tsy misy ny nanesorana amin’ny toerany ny Tonia ambony mpampanoa lalàna (PGCS), Ranary Rakotonavalona Robertson. Fanapahan-kevitra noraisina teo amin’ny filankevitry ny minisitra notarihin’ny filoham-pirenana mihitsy, herinandro vitsy lasa izay ny nanala azy io amin’ny toerany. Tsy nipetra-potsiny manoloana izany tsy fahaizana lalàna sy ny pitsopitsony izany anefa ny mpisolovava ka nitory teny amin’ny filankevi-panjakana. Notakin’izy ireo ny hanafoanana izany didy manala an-dRanary Rakotonavalona Robertson amin’ny toerany izany. Fa eo koa ny nitakiana ny hanafoanana mihitsy ilay didy fampiharana. Neken’ny filankevi-panjakana izany ary izao nandresy izao izy ireo.
Nohitsin’izy ireo fa misy fitsabatsabahana andraikitra ao anatin’ity raharaha ity ary tsy manaja ny an-tanan-tohatra samihafa ny mpitondra. “tsy anjaran’ny filoham-pirenana na ananany fahefana na koa ny mpanatanteraka ny manala azy amin’ny toerany. Tsy anisan’ireo mpiasam-panjakana ambony voalaza amin’ireny filankevitry ny minisitra ireny ny tonia ambony mpampanoa lalàna Ranary Rakotonavalona Robertson fa an’ny rantsam-pitsaran. Tsy misy idiran’ny governemanta nefa nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Tsy napetraka fotsiny akory ny CSM ary ao anaty fanjakana tan-dalàna isika ka tokony hohajaina izany”, hoy ihany izy ireo. Nohitrikitrihin’izy ireo fa nahitana fandikan-dalàna ny raharaha.
Tsiahivina fa efa nitsipaka tanteraka izao, filoaram-pefy ataon’ny mpitondra izao ny SMM, tamin’ny alalan’ny filohany, Fanirisoa Ernaivo, “Anjaran’ny Filankevitra ambonin’ny Mpitsara (CSM) ny maka fanapahan-kevitra momba izany fa tsy misy idiran’ny governemanta. Tsy andraikitra politika na mitovy amin’ny mpiasam-panjakana ambony na tale jeneraly io fa lehiben’ny rantsam-pitsarana”, hoy izy.
Minisitra miteniteny foana…
Tsy vitan’izany rahateo fa tsy nisy hadisoana goavana nataon’io tonia ambony mpampanoa lalàna io na niakarany teo anivon’ny filankevi-pitsim-pifehezana (Codis) nefa nesorina. Midika izany fa tsy mahay sy tsy mahalala ny tokony hataony ny mpitondra. Anisan’ny tsy afa-bela amin’izany ny minisitry ny Fitsarana. Tahaka ny efa nataon’ny minisitra sasany ihany niteniteny foana ny datim-pifidianana any ivelany. Na koa ny hafa nilaza fa hadisoana tsy nahy ny nampihoatra aorta telo ny sora-bola amin’ny tsenam-baro-panjakana. Rahampitso, iza indray ny minisitra na tompon’andraikitra hanara-dia ireo namany ireo?
Article précédentMadagascar – RANARY RAKOTONAVALONA reprend son poste de Procureur général de la cour Suprême – Les nouvelles du 14 mars 2018
Article suivantMadagascar – Limogeage du PGCS : Le décret présidentiel annulé par le Conseil d’Etat – Midi madagasikara du 14 mars 2018